Nwee ume ntupu Panel - China Hebei Samsung Metal waya ntupu
Nwee ume ntupu Panel
Nwee ume ntupu na-eji maka mkwado ihe, na-arụpụtara ka SANS 1024: 2006 na ndị ọzọ na mba ọkọlọtọ nkọwa. Atụmatụ: • nwee ume ntupu ute bụ ndị akacha eji ụdị prefabricated mkwado na karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na ewepụghị slab ewu na ihe n'elu akwa. Ndị ọzọ e mere ngwa na-agụnye: • retaining na Shea mgbidi ya; • ibé na ogidi; • Ihe Paving machite; • Precast ihe ọcha; • Ụlọ oru ngo; • SW ...
Nwee ume ntupu na-eji maka mkwado ihe, na-arụpụtara ka SANS 1024: 2006 na ndị ọzọ na mba ọkọlọtọ nkọwa.
• nwee ume ntupu ute bụ ndị akacha eji ụdị prefabricated mkwado na karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na ewepụghị slab ewu na ihe n'elu akwa. Ndị ọzọ e mere ngwa na-agụnye:
• retaining na Shea mgbidi ya;
• ibé na ogidi;
• Ihe Paving machite;
• Precast ihe ọcha;
• Ụlọ oru ngo;
• Igwu ọdọ mmiri na gunite ewu.
• nwee ume ntupu ute nwere ike akowaputara ka ma ewepụghị ma ọ bụ kpebisiri Ibé akwụkwọ, dabere na ọrụ chọrọ.
• nwee ume ntupu mkwado ukwu ebelata ewu oge.
• SANS 1024: 2006 ẹkedọhọde ákwà ute bụ ọkọlọtọ welded mkwado ute na ike ga-ndokwa nanị site akwụkwọ kwuru na-akpa ákwà ụdị, mpempe akwụkwọ akụkụ ndị na-ekwe udi codes (The akwụkwọ bụ elu ọnụ uka nke ákwà na kg / m2 × 100).
• The oyi-akpọrepu oruru waya eji na welded ntupu ákwà nwere a mara ike (0,2% àmà nchegbu) a kacha nta nke 485MPa tụnyere 450MPa n'ihi na elu tensile rebar. Fabric ike ga-eji na elu nsogbu karịa elu tensile rebar dapụtara na ihe onwunwe ịzọpụta ruo 8%.
The nwee ume ntupu na-arụpụtara n'okpuru echesinụ quality njikwa na ụkpụrụ nile sụgharịa ka SANS 1024: 2006 ọkọlọtọ nkọwa na tolerances
Daalụ maka ileta anyị website. Biko chere free ịhapụ ozi ma ọ bụrụ na ị na ajụjụ ọ bụla.
Previous: Electro kpaliri welded ntupu Panel
Osote: Construction ntupu Panel
Nwee ume Cement ntupu
nwee ume Concrete ntupu
nwee ume Rebar ntupu
Staninless Steel Aguba waya nwere ogwu